DAAWO:Dawlada Somaliya Dab Ku Qabanasa Boosaaso iyo Cali Saleebaan, – KHAATUMO NEWS
Waxaan rabaa in aan wax yar ka iraahdo lacag ay Dawlada Dhexe u soo dirtay Bosaaso taas oo xasarad abuurtay. Si lacagtaas loo soo diro waxaa Dawladu la hadashay laba nin oo ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha wado Bosaaso laga dhisayo. Guddigaas waxaa magacaabay muddo hore Maweynihii hore ee Puntland Abdiwali Cali Gaas
Sida la sheegay muddo hadda laga joogo waqti fog ayaa Xukumada Federaalka laga codsaday inay ka qayb qaadato dhismaha wadadaas oo halbowle u ah isu socodka magaalada laakiin wax khabaar ah Dawlada lagama helin. Labada nin oo lala soo hadlay si lacagta magacooda loogu soo diro ayaa ka cudur daartay aqbalaada lacagtaas dhowr sababood awgeed. Sababhaas waxaa ka mid ahaa mashruucii oo gabagaba maraya, wadada la soo marinayo lacagta oo aan sax ahayn iyo xilliga lagu beegay lacag bixinta. Diidmadaas ka dib, mar labaad waxay Federaalku la soo hadashay rag kale oo isla guddiga hawsha u xilsaaran ku jiray laakiin aan awal lala soo hadlin waxayna ka codsadeen inay lacagtaas aqbalaan, waana aqbaleen. Arrintaas ayaa keentay xiisad gaarsiisan in la xiro dadkii lacagta aqbalay. Dhinaca kale odayaal ka mid ah odayaasha reer Bosaaso ayaa dhibsaday xariga odayaasha una soo jeediyey maamulka Puntland eedayn.
Dhinaca kale, waxaan dadweynaha reer Puntland xasuusinayaa khaasatan dhalinyarada n inta xiriirka hoose la idin leeyahay ay ku egtahay inta Puntland nabad tahay oo maamul shaqaynayaa ka jiro.
Previous Post: Taliyaha Ciidanka Kenya Oo Safar Qarsoodi ah Ku yimid Jubaland,
Next Post: Deg Deg Daawo:Puntland Oo Ciidan Xoogan Buuhoodle Ku soo Bandhigtay,